Geofeedia: Yemagariro Media Kuongorora, Huchenjeri uye Kuongorora neNzvimbo | Martech Zone
Mugovera, January 24, 2015 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Geofeedia ipuratifomu yepamutemo iyo vatengesi vanogona kushandisa kuongorora uye kuongorora nzvimbo-based social media. Iyi inogona kuve inonyanya kubatsira kushambadzira zano kune ese ane mbiri manejimendi manejimendi, kana yeanoshanda projekiti yekuwana. Pamwe uri mupi webasa kana une vamiriri vazhinji vebasa munzvimbo dzakananga - unogona kuongorora ese magariro enhau ezvekutaura kana evatengi vanenge vachitsvaga rubatsiro.
Kiyi Geofeedia Zvimiro uye Zvakanakira
tarisisa - Unganidza uye chengetedza zvemagariro midhiya zvemukati kubva kunotsanangurwa matunhu.
firita - Gadziridza mitsva yekutsvaga nezwi rakakosha, mushandisi, zuva, awa, sosi yemagariro enhau uye nezvimwe.
Ita mupfungwa - Mepu yekuona inoratidza iyo chaiyo nzvimbo yezvako zvemukati, kollaji maonero anokuratidzira iwe nguva uye kuteedzana kwemapositi uye mhenyu kutenderera kunoratidza zvitsva zvemukati munguva chaiyo kubva kunzvimbo dzakawanda pane imwechete skrini.
ongorora - Yangu yakachengetwa dhata yekutsvaga kiyi kiyi maitiro, zviitiko zvenguva-yakatarwa, zvine simba maposita, zviitiko zvechiitiko, masocial media masosi uye nezvimwe.
Archive - Chengeta yako data mune yegore-yakavakirwa dhata nzvimbo yekuzotora mune ramangwana uye kuongorora.
ekisipoti - Geofeedia inopa yakazara-inowoneka API, CSV kuburitsa kunze, embeddable majeti uye RSS dhata kunze kwenyika muATOM, GeoRSS kana JSON mafomati.
Alerts - Gamuchira otomatiki maemail ekuzivisa munguva chaiyo zvichibva pane rakakosha kiyi kiyi kana zita rekushandisa.
turikira - Dudziro yekutsvaga mhinduro kune chero mutauro chero nekudzvanya kamwe chete.
Gadzira Tsika Miganhu yako yeSocial Media Query
Wona iyo Nzvimbo-Yakavakirwa Social Media Query kuburikidza neCollage
Ongorora Nzvimbo-Yakavakirwa Yemagariro Midhiya
RTS - Mepu Kuona
RTS - Ongororo
Kurekodha Analytics & Sentiment
Kufuridzira - Collage View
Kuti udzidze zvakawanda nezve geosocial targeting, tora yavo whitepaper, "Iyo Geosocial Marketer's Roadmap", nhasi.
Dhawunirodha iyo Geosocial Marketer's Roadmap
Tags: archive yemagariro enhauGeogeofeedianzvimbogeographic social media chenjedzogisnzvimbo-based social media ongororonzvimbo-yakavakirwa pasocial media njeremagariro enhaupasocial media feedssocial media njeremagariro enhau
Kunzwisisa Kubhadhara Kwese Kubaya paKubaya kunobatsira Yako Organic Kutsvaga